भारत सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरोटरी) जम्मुकश्मीर र लद्दाकसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सासार्वजनिक गरेको हो । त्यसका लागि जम्मुकश्मीरको पुनर्गठनसम्बन्धी आदेश शनिबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
गत अगस्ट ५ मा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरिएको थियो । त्यसका साथै मुस्लिम बाहुल्य राज्यलाई दुइटा केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजनगर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । दुइटा युनिटमा विभाजन गर्ने निर्णय ३१ अक्टोबरको मध्यरातबाट लागू हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनमा केन्द्र सरकारलेभारतको नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।
जम्मुकश्मीरमा भने दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा भने दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ । केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल नियुक्त गरिएकोछ । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरिशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ ।
नयाँ युनियन टेरोटरी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । नयाँ नक्साअनुसार भारतमा २८ राज्य र ९ केन्द्रशासित प्रदेश रहनेछन् साथैभारतको नयाँ नक्सासँगै पहिले जम्मुकश्मीरलाई विभाजन गरेर नयाँ कायम गरिएका दुइटा युटीअन्तर्गतका जिल्ला पनि रेखांकन गरिएको छ ।
सन् १९४७ को नक्साअनुसार जम्मुकश्मीरमा १४ जिल्ला थिए भने यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य सरकारले ती जिल्लालाई विभाजन गरी २८ पुर्‍याएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशितजम्मुकश्मीरको पुनर्गठन आदेश २०१९ अनुसार नयाँ नक्सामा जम्मुकश्मीरमा २० जिल्ला छन् भने लद्दाकमा कारगिल र लेह जिल्लामा समेटिएको छ । रोचक के छ भने नयाँ नक्सामापाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरलाई पनि समेटिएको छ । जम्मुकश्मीरअन्तर्गत पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई सामेल गरिएको छ साथैगिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत राखिएको छ ।
नरेन्द्र मोदी सरकारले जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो देशका केही जिल्ला समेटिएपछि पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद,मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मुकश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत समावेश गरिएपछि पाकिस्तान रुष्ट भएको हो ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतद्वारा जारी जम्मुकश्मीरसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा कानुनी रूपमा अमान्य भएको साथै त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित प्रस्तावको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको बताएको छ ।
जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रियमञ्चमा समेत भारतीय निर्णयको विरोधमा समर्थन जुटाउन पहल र पैरवीसमेत गर्दै आएको छ ।
कहिलेकाहीँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघले राज्यको शासकीय अधिकार संघीय भावना अनुरूप प्रादेशिक र स्थानीय तहमा दिन कन्जुस्याइँ गरेको आरोप झिनो आवाजमा लगाउँछन् । तर त्यसले कुनै परिणाम ल्याउँदैन । कारण प्रस्टै छ— उनीहरूलाई कडा प्रतिवाद गरेर भइरहेको आकर्षक लाभको पद गुमाउनु छैन । संघीयताको भविष्य जेसुकैहोओस् !
संस्थागत तहमा यस्ता राजनीतिक प्राधिकार बाँडफाँडको विवाद सल्टाउन संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेशपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र संघीय सरकारका गृह र अर्थमन्त्री सदस्य रहने यो परिषद्को बैठकै बस्दैन । यसमा प्रधानमन्त्रीकै खास चासो देखिएको छैन । वर्तमान सरकार बनेको एक्काइस महिनाको अवधिमा जम्मा दुई पटकपरिषद्को संक्षिप्त बैठक भएको छ । बैठकले गरेका संघीय र प्र्रादेशिक सरकारहरू बीचको राजकीय अधिकार प्रयोग बारेका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा विरलै आएका छन् ।
पर्याप्त संस्थागत र कानुनी संयन्त्रहरू निर्माण नगरिदिने र संविधानले सञ्चालन स्वायत्तता दिएका संघीयतासम्बद्ध संस्थाहरूलाई पनि सरकारको ठाडो आदेशमै चलाउने कोराकसरत बढेको छ । खास गरी आर्थिक स्रोत बाँडफाँडको निर्णयमा स्थापित संघीय मान्यताप्रति सरकार पटक्कै उदार देखिनसकेको छैन ।
के अब स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीले लिने सबै सुविधा ‘तलब’ का नाममा नलिएर ‘सुविधा’ का नाममा मात्र लिने हो ? यसरी नाम फरक पारेर लिँंदैमा उनीहरूले राजस्वबाट आफ्ना लागि खर्च गर्ने रकममा कसरी कमी आउँछ ? स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्पूर्णतः सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो भने, त्यही मान्यता प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरूका हकमा किन लागू नहुने ? आखिर स्थानीय तहलाई पनि संविधानले अधिकारसम्पन्न ‘सरकार’ नै भनेको जो छ । यसले भ्रष्टाचारलाई कति प्रश्रय देला ? र,स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने आकर्षण के होला अनि सरकार सञ्चालनमा पदाधिकारीहरूको कति ऊर्जा र समय व्यतीत होला ? यी तमाम पक्षमा यथेष्ट विचार–विमर्श भएको छैन । तीनै तहका सरकार र पदाधिकारी यथार्थमा कसरी परिचालित हुनुपर्छ भन्ने आदर्श कानुनी र अभ्यासको साझा खाका बनाउन राज्य असफल भएको छ ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, सबै तहका सरकार सञ्चालकहरू र तथाकथित प्रबुद्ध भनिने वर्गभित्रैबाट यस्ता धारणा बराबर सुन्नमा आउनु कुनै शुभसंकेत होइन । यसले मुलुकको संघीय भविष्यलाई थप अन्योलग्रस्त मात्र बनाउँछ । संघीय राज्य प्रणाली चल्नै नसक्ने बाटोमा नेपाल उन्मुख भइसकेको हो भने, यसको थप आकर्षक विकल्प के हो भन्ने पनि यहीवर्गले किटानीसाथ भन्न सक्नुपर्छ ।
अन्यथा नेपालको संघीयताको नियति पनि मेक्सिकोको एक सय वर्षको संघीयताकोजस्तै ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ युक्त हुने खतरा छ, जसका संविधान र राज्य प्रणाली त संघीय आदर्श अनुरूप छन्, तर न संघीयताले व्यवहारमा यथेष्ट शक्ति निक्षेपित गर्न सकेको छ, न त विकास र समृद्धिमा अपेक्षाकृत योगदान नै । र, संघीयता विघटन गर्न झन् असम्भव छ ।